7 Day Best Trips From Naples In Italy | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Day Best Trips From Naples In Italy
Naples chinhu chinoshamisa, quintessential Italian dhorobha. Rakazara zvikomo, zvivako akare, uye nezvimwe duku uye akanaka zvinoshamisa. Zviri chezvematongerwe Vakakwana Italian mutaundi wose anoda kuona echokwadi Italian mweya uye yakanakisisa zuva nzendo kubva Naples.
zvisinei, kuti haisi zvose. Unofanira kuenda Naples nokuda zvikuru cook vanoita. The cook havasi hwemazuva mhando unogona kuwana pose. The Napoli Pizza chinhu yakasiyana uye Anozvirumbidza manakire isingagoni vachiwirirana.
Asi isu digress. Kana ukava mune Naples, haufaniri kupedza nguva yako yose vakashamisika kunaka kweguta uye vachidya rinokudzwa Pizza yavo. Unofanirawo kushanyira nharaunda. Izvozvo nokuti Naples unozvikudza mamwe nharaunda yakanaka yose Italy. Kubva hombe rePompeii wezvakaparadzwa picturesque uye zvinonzwisisika nomukurumbira Amalfi pamhenderekedzo - unogona kuona zvakawanda.
Uchifunga, takafunga kuti kukubatsira nokukupai pakupedzisira mazita nomwe yakanakisisa zuva nzendo kubva Naples, Itari. Ngatikurukurei kutanga:
1. Rimwe Of The Best Day Trips From Naples: The Ruins Of Herculaneum
Taida kutanga kwete pachena asi kashoma pachena. NeHerculaneum ndiwo zvishoma inozivikanwa hama rePompeii. The ikozvino nomukurumbira 79 AD kuputika kweGomo reVesuvius akaparadza vose rePompeii uye pedyo Herculaneum.
zvisinei, nhasi, vose anokudza vanoenda rePompeii. Chinenge munhu wose munyika anoziva rePompeii ndiye, asi vashoma vanoziva nezvacho Herculaneum. Izvi zvinonyadzisa guru kana iwe kutibvunza.
Kutanga kwazvose, NeHerculaneum zvikuru akachengetedzwa. Kana wasvikako, uchawana zvakawanda dzimba nezvimwe zvivako anenge sanganisika.
Chepiri, NeHerculaneum haawanzopiwi yakatsvikinyidzana. Sezvatakamboreva kare, Matongo aya zvishoma anozivikanwa uye nyirwa mu maduku nhamba. Uyewo maduku uye nyore kuona apa.
Visiting Herculaneum zviri nyore chaizvo, sezvo nezvitima endai kubva Naples ose awa kana kuti. Haufaniri kunyange kunetseka pamusoro nguva sezvo uchava zvakawanda kuti kuona matongo izvi.
Kunyange zvazvo Herculaneum zvikuru yakanaka, kwedu mafungiro, haugoni kurasikirwa rePompeii. tsime, yakanakisisa zuva nzendo kubva Naples nguva dzose kuti zvinosanganisira vose rePompeii neHerculaneum.
Guta rose Naples anogara pamumvuri simba reVesuvius. zvisinei, chete rePompeii anogona zvechokwadi kutaura kuti anoziva nesimba reVesuvius. Unogona kuona gomo kana mune Pompei, uye unogona kunzwisisa simba chete vachishingaira gomo muEurope zvechokwadi.
Kana ukaenda rePompeii, unofanira kuva vakagadzirira. Nzvimbo zvakawanda hombe pane vanhu vakawanda vanofunga, saka unofanira kuenda ikoko mangwanani sezvo uchigona. Pamusoro pe izvozvo, kana ukaenda muzhizha, kuchipisa chaizvo, saka uchada kuuya mijenya emvura.
zvisinei, kusvika rePompeii ndiye nyore chikamu. Unogona kukurumidza kusvika kubva Naples Via chitima, chinokambaira ipapo yose zuva.
3. Rimwe Of The Best Day Trips From Naples: Mount reVesuvius
zvinotarisirwa, kwete kushanya kune Naples kungava kwakakwana asingaoni reVesuvius. You chaizvoizvo haagoni kupinda pasina kuchiona nokuti ayo hombe saizi chinogona kuonekwa kubva zvinenge zvapo Naples.
zvisinei, unganyatsozvifusha kuwana kwete kure, asi nokuda vakamira pamusoro payo. Gomo iri rakareba chaizvo, asi iwe unogona vachiri kutora vakarongeka rwavakaita uye hike kumusoro muawa zvichidzika. Uchazviwanazve kudenha, asi ruzivo uchawana pamusoro zvachose zviripo.
Kuti asvike Mount reVesuvius, zvose zvaunoda kuti kutora kutsanya chitima kubva Naples kuti anotora iwe pedo pasi kuti Ercolano Scavi yemapurisa. Zvino unofanira kutora rimwe Vesuvio Express Mabhazi kuti vaende kutanga pfungwa zvine mwero rakaoma kwidza.
Pescara kuna Naples Zvitima
The rose Amalfi Coast ari chete achikumbira kuti kuonekwa. Kamwe ukaenda ikoko, iwe kurumidzai kuona sei. Hombe mawere vari kushamiswa mukanwa, uye kunaka gungwa usingatsananguriki.
Unofanira tora chitima kuchovha kuti kana Sorrento kana Salerno. Zvadaro unogona kutora bhazi kana kubvarura motokari kuenda pamusoro kumigwagwa tuduku kuti kuyambuka ari Amalfi pamhenderekedzo.
Positano zvakarurama pakati mhenderekedzo unonyanya dhorobha yakanaka pamusoro payo. Kana iwe nokusingaperi akaona chero mifananidzo maguta ari Amalfi Coast, wakamboona Ungangove Positano. Mbiri runopoteredza guta kwakakodzera, sezvo girl ndiye mukare.
Power Zvitima kuna Naples
Salerno kuna Naples Zvitima
Taranto kuna Naples Zvitima
5. Rimwe Of The Best Day Trips From Naples: Sorrento
Sorento iri kataundi rinogarira kurutivi rwakatarisana of Amalfi pamhenderekedzo. Saka pedyo Naples, uye iwe unogona kusvika chaizvo nyore nayo Via zvomunharaunda chitima mitsetse.
Taundi unozvikudza vaviri achirova mahombekombe uye kwazvo muguta rekare. Vanhu vazhinji endai Sorrento, kwete nokuti gungwa uye zvinotyisa mawere, asi yenhoroondo. Sorrento zvechokwadi quintessential Italian guta rekare. Zviri duku zvikuru pane Naples uye ane kuti Italian mweya maguta vechokwadi vekare duku chete Italian zasi anogona kuva.
Pamusoro pe izvozvo, unofanira zvachose kushanyira Sorrento parimwe nepaunogona zuva nzendo kubva Naples nokuda Capri. Vechiwi Capri riri pedyo uye ari nokure chimwe chezvinhu zviwi yakanaka duku here pachazombova.
Foggia kuna Naples Zvitima
Tivoli kuna Naples Zvitima
Temoli kuna Naples Zvitima
Lecce kuna Naples Zvitima
Several naka zvitsuwa komberedza Naples. zvisinei, nokure kupfuura yakanaka ndiye Ischia, uye pano Ndokusaka:
Ischia ndicho chitsuwa chikuru chiri yeNaples
Ischia ane zvose: mahombekombe, chafariz mvura, mumaresitorendi, uye zvikuru zvivako
Ndiyo nzvimbo yakanakisisa yokutandara muna Naples. Unogonawo kuwana rakakurumidza nokutora chikepe kubva pakati Naples.
Havana Musadana ichi hombe 1200 nzvimbo yamambo Italian Versailles pasina. The mumuzinda izere akakura masitepisi uye ari UNESCO World Heritage Site. Uchaonawo zvemaoresa dzoumambo Apartments uye dzakaunganidzwa presepi - Christmas cribs kuna Naples.
Zvese muzvese, haugoni kuenda kuipa nokushanyira ichi hombe mumuzinda. Unogona kutora chitima kubva Central Station Naples uye kubuda panguva Caserta yemapurisa. The yamambo kunongova pfupi kufamba pashure.
Naples kuna Caserta Zvitima
Salerno kuna Caserta Zvitima
Simba Caserta Zvitima
Bari para Caserta Zvitima
saka, ipapo iwe une navo, vanomwe yakanakisisa zuva nzendo kubva Naples. Kana uchida zvechokwadi nekusangana kunaka Naples, unofanira kuenda vose nzendo idzi. wo, kana uchida kudzidza zvakawanda, inzwa wakasununguka kuonana Save A Train.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Day Best Trips From Naples In Italy” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-naples/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Masikati europetravel italyvacation Naples Naples Tranride chitima mazano travelitaly traveltips
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe